allsanaag.com - Garsoore Amaankiisa u Baqay
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3205	Days	01	Hour	07	Minutes	47	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Garsoore Amaankiisa u Baqay
Written by Shanle	Allsanaag: Garsoore ayaa ka soo cararey maamulka Hargeysa gaar ahaana magaalada Burco halkaasoo uu ka ahaa garsoore in muddo ah, hadeerna sheegay in cid ammaankiisa sugeysaa aysan jirin oo uu u baqay naftiisa. Dadka iyaga kasoo jeeda gobolada qaarkood ayaa ku dhiban dhulkaa ay qariibka ku yihiin. Fadlan hoos ka daawo waxa uu yiri ninkan ka soo goostay Burco.